Global Voices teny Malagasy » Shily: Mankalaza Ilay Fitondrana Miaramilan’ny Firenena Voalohany · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 23 Janoary 2018 15:07 GMT 1	 · Mpanoratra Rosario Lizana Nandika Miranah
Sokajy: Amerika Latina, Shily, Mediam-bahoaka, Sakafo, Tantara, Zavakanto & Kolontsaina
Ny 18 Septambra, hankalaza ny fitondrana miaramila Nasionaly Voalohany izay napetraka tamin'ny taona 1810 isika. Araka ny fanazavan'ny Geographic Military Institute (ES) :
Nahoana isika no tsy maintsy manao io fanazavana io? Marcyflor  namoaka fanadihadiana izay navoaka tao amin'ny gazety teo an-toerana. Natao tao amin'ny tanàna 4 ny fanadihadiana, tamin'ny alàlan'ny fiantsoana an-tariby an'ireo tokantrano miisa 714, ary nanambara ny 69% tamin'ireo nanontaniana fa tsy mahafantatra ny anton'ny fankalazana ry zareo. Tahaka izao ny famintinana:
Mankalaza foana ny vahoaka na izany aza. Tamin'ny fomba nentim-paharazana, zatra nanatrika fondas, na fitsangatsanganana mamelombelona ny olona, ​​izay voaravaka amin'ny lokon'ny sainam-pirenena Shiliana; mena, manga ary fotsy. Ny sakafo nentim-paharazana dia ahitana “empanadas” (mofomamy masira) sy “barbecue”. Ny zava-pisotro nentim-paharazana dia chicha , vita amin'ny voaloboka ary tena mamy izany. Ny dihy nentim-paharazana dia Cueca , ary tahaka ny dihy nentim-paharazana marobe, izay fombafomba fikaotikaotiana eo amin'ny mpifankatia. Namoaka sary vitsivitsy tamin'ity dihy ity i Manosylanas (ES), mahita lehilahy “huaso” sy vehivavy “china” isika amin'izany. Noho izany, afa-mijery huaso sy china mandihy Cueca miaraka amin'ny akanjo nentim-paharazana ianao.
Lore  (ES) nanoratra tao amin'ny bilaoginy momba ny fanatrehana ny fondas oniversite. Tsy nahatratra ny Cueca izy ary tsy manaiky izy ny hihaino Reggeton na hip hop rehefa tsy ny dihy nentim-paharazana Cueca. Amin'ny faran'ny ambany amin'ny lahatsoratra, manolotra torohevitra fialantsasatra izay mety hanampy amin'ny fahatakarana ny fankalazana izy:
Mampiroborobo ny Fondas ny bilaogy sasany, toy ny Disorder  sy Saborizante , bilaogy mampiroborobo ny seho an-tsehatra amin'ny alina, izay manasa ny mpamaky hanatrika Fonda tsy nentim-paharazana:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/01/23/113775/
 Ditto_ Chileno : http://static.flickr.com/48/186459899_ee2b2d3ccc_m.jpg